Mizzima TV Weekly, Business News No . 8 (Sat 23 February , 2013) | OurGoldenNews.com
Mizzima TV Weekly, Business News No . 8 (Sat 23 February , 2013)
အပတ်စဉ် စီးပွားရေးသတင်း (၈)
ဒီတပတ်အတွက် တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် မြေဈေးကြီးမှုဟာ အဟန့်အတား ဖြစ်နေပြီလား၊ ရန်ကုန်မြို့ ဗားကရာကုန်စည်ဒိုင်က အုန်း၊ ငှက်ပျော၊ ကြံ စတာတွေရဲ့ ဈေးကွက်အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုခ ဈေးနှုန်းတွေအကြောင်း …… စတဲ့ သတင်းတွေအပြင် နောက်ဆုံးရ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။